Roob laxaad leh oo ka da'ay Buuhoodle - BBC News Somali
Roob laxaad leh oo ka da'ay Buuhoodle
Wararka ka imanaya deegaanada hawdka ee degmada Buuhoodle, ayaa sheegaya in dad ku barakaceen tuulada Dan-Dan, kadib roob laxaad leh oo ka da'ay halkaasi.
Tuulada DAN-DAN, oo 24-km bari ka xigta magaalada Buuhoodle, ayey xalay ka da'een roob laxaad leh oo daadad ku soo rogay tuuladaasi oo da'ayay shan saacadood oo xiriir ahaa.
Xasan Faarax oo ah ganacsade ku nool tuuldaasi, wuxuu BBC u sheegay in gebi ahaanba tuuladaasi oo ay ku noolyihiin shan boqol oo qoys oo xoolo dhaqato ahi, ay daadadkaasi barakiciyeen, kadib markii biyuhu ugu soo galeen guryahooda iyo meheradihii ganacsiga .
Dad ku dhintay ma jiraan halkaasi, laakiin dadka deegaanku waxay BBC u sheegeen in badeecadihii ganacsiga iyo alaabtii guryuhu wada baaba'een. Waxay sheegeen in galabta dadku ku noqonyaan guryahoodii tuulada DAN-DAN oo biyihu fadhiyeen. Wax gurmad ah ee dadkaasi ay heleen ma sheegin .
Dhinaca kalena, roobab fiican oo lagu diirsaday, ayaa ka da'ay deegaanada kale ee Buuhoodle.
Sidoo kale, sida uu BBC u sheegay guddoomiyaha gobolka togdheer, Maxamed Muuse diiriye, waxaa roobab biyo laga helay ka da'een xalay jiidda hawdka ee bari iyo galbeed ee gobolka togdheer iyo magaalada Burco gudaheeda .
Somaliland, gobollada galbeedka, ayaa waxaa ka jirtay abaar sababtay inaan xilligii guga la beerin beeraha. ilaa iyo haddana biyo la'aan ayaa ka jirta deeganada qaarkood, sida Balli-gubadle iyo Sallaxley.